Mugabe was expected to resign during a televised address on Sunday, but instead clung on to power after reading a speech which did not acknowledge the demands of ZANU-PF elite and the Zimbabwean army.
Today, ZANU-PF issued a new ultimatum, demanding that Mugabe leave office within 24 hours. The party has already stripped the long serving Zimbabwean leader of his status as party leader while his wife Grace who was tipped to replace Mugabe upon his death or retirement, has reportedly fled the country.
Shortly after impeachment proceedings commenced, the Speaker of Zimbabwe’s parliament stated that he received Robert Mugabe’s formal letter of resignation.
According to the AFP, as cited by Sputnik,
Mr. Mugabe wrote in his letter,
“I Robert Gabriel Mugabe in terms of section 96 of the constitution of Zimbabwe hereby formally tender my resignation… with immediate effect”.
Robert Mugabe was President of Zimbabwe since 1987 and had been Prime Minister prior to that, starting in 1980, the year Zimbabwe gained full independence.